MPEG Editor - Sida loo Edit MPEG Video Files
> Resource > Video > Sida loo Edit MPEG Video Files
MPEG noqdo aad iyo aad u caansan dunida multimedia maanta. Hab sahlan oo dhakhso ah ay u xaalkaa files MPEG waa in la isticmaalo Editor MPEG ah. Waxaan ugu Wondershare si dabiici ah ku talinaynaa Wondershare Video Editor : ah software video tafatirka u fiican si ay kuu caawiyaan dalagga, jar, darsamaan, iyo isku shaandheyn MPEG videos, ama ku darto saamaynta qabow guurka, filtarrada, qoraalka, iwm si kor videos.
Waa maxay ka badan, Tan MPEG software video tafatirka sidoo kale waa Converter video ah. Waxaad inay qaab kale u bedeli karaan abuurkiinna iyo badbaadin on your computer sida aad jeceshahay.
Free download Editor MPEG ah (maxkamad free), ka dibna raac tallaabooyinka hoose si aad xaalkaa MPEG videos aad PC fudayd iyo madadaalo. Haddii aad tahay user Mac ah, u leexdo xagga Mac Video Editor caawimaad.
Guji "Import" ama jiitaa sii jeedi in aad ku darto files si ay leeg- tahay khayraadka. Oo dhan files ku daray in la soo bandhigi doonaa in User ee Album oo aad xor u tahay iyaga ku eegaan on suuqa kala xaq u arkaysid iyo qaato snapshots ee goobaha video aad jeceshahay ah. Ka sokow file MPEG, taas MPEG video editor sidoo kale kaa caawin kara inaad wax ka bedel MP4, FLV, AVI, MOV, Mpg, wmv, MKV, iwm
Markaas jiidi files si ay ula socdaan video on Timeline ah. Si aad xaalkaa video MPEG ah, double click on thumbnail in la furo guddi tafatir ah ee bidixda xagga kore. Waxaad arki doontaa bar video ah, bar Audio iyo button Dalag. Riix bar Video / Audio in ay ballaadhiyaan. Sida aad arki karto, riix si isku shaandheyn, dhajisan, oo wuxuu qotomiyey video duwan, saturation iyo dhalaalka, si degdeg ah / mooshin gaabis ah, iwm Waxa kale oo aad ku dari kartaa qoraalka horyalka Talyaaniga iyo saamaynta video farshaxanka si aad videos shakhsiga iyo il-qabad.
3 dar goobta guurka
Si aad u codsato kala guurka goobta gaar ah u dhexeeya qaybaha video, guji guurka tab iyo jiididda kala guurka video clip on track Video ah.
4 Share saxar MPEG video
Ka dib markii tafatirka, guji "Abuur" dooro meesha aad rabto inaad la wadaagto aad saxar MPEG videos. Markaas doortaan qaab wax soo saarka sida ay tahay qalabka iyo sheeg caga deegaanka on your computer u badbaadiyo. Notes: Ka dib qaab beddelidda, si aad u Lugood wareejin karaan video ee kaga dayanayaan inay iPhone, iPod, iPad. Waxa kale oo aad ku badbaadin kartaa video in drive deegaanka adag in qaabab kala duwan video, videos share on YouTube si toos ah ama si DVD cajalladaha gubi video.
Badan oo ku saabsan files MPEG : The 'Guuritaanka Picture Khubarada Group' (MPEG) waa koox ka shaqeeya khubaro ah oo la sameeyay ISO iyo IEC inu u sameeyo qiyaas audio iyo video riixo iyo gudbinta. Waxaa la aasaasay 1988-dii, ayaa kulankiisii ​​ugu horreeyey ku jirtay May 1988 ee Ottawa, Canada.
Hoos waxaa ku qoran talaabo talaabo ah video tutorial ku saabsan sida loo edit files MPEG:
Download MPEG Video Editor (maxkamad free):